Trump iyo Kim oo kulankii u dhaxeeyay ku soo dhamaaday is fahamwaa magalada Hanoi ee dalka Vietnam – Walaal24 Newss
Trump iyo Kim oo kulankii u dhaxeeyay ku soo dhamaaday is fahamwaa magalada Hanoi ee dalka Vietnam
Kulankii u dhaxeeyay madaxda Trump iyo Kim aysan lagu waramay in aysan jirin wax heshiis ah oo la gaaray ka dib Labadaan hogaamiye ayaa fiidnimadii xalay kulan casho ah ku qaatay hotel ku yaal magaalada, iyadoo la filayay in ay qalinka ku duugaan heshiis wax ku ool ah oo quseeya hubka Nuclear-ka Kuuriya.
Trump ayaa waxaa uu sheegay in Kim uu kala hadlay sidii kuuriyada waqooyi ay uga tanaazuli laheyd kordhinta hubka wax gumaada ee Nuclear-ka.
Kim uu isagana soo jeediyay in Mareykanka uu qaado cunaqabateyta mudada dheer saaran waqooyiga Kuuriya.
Madaxweynaha Maeykanka uu ku gacanseyray dalab ka yimid Madaxweynaha W/Kuuriya oo la xiriiray in la qaado cunaqabateynta saaran.
Trump oo qabtay shir jaraa’id yaa sheegay in W/Kuuriya ay dooneyso in gebi ahaan la qaado cunaqabeynta,isagoo intaa raaciyay in uusan sameyn Karin arintaasi.
Ma jiro heshiis la gaaray balse waxaa la filayaa in kooxaha ka kala socda Mareykanka iyo W/Kuuriya ay u sii gogol xaaraan wadahadallo mustaqbalka ah, Waloow, Mr Trump uu yiri ma jiro qorshe loo sameeyay Shir saddexaad.
Dowlada Soomaaliya oo Amisom kala wareegtay Kuliyadda Jaalle Siyaad ee Magaalada Muqdisho
Kulan looga hadlayay dar-dar gelinta qorshaha kala guurka ee bixitaanka AMISOM oo lagu qabtay magalada Muqdisho